Chi tiết cách trồng và chăm sóc dâu tây tại nhà cho trái đỏ chín mọng | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Chi tiết cách trồng và chăm sóc dâu tây tại nhà cho trái đỏ chín mọng | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Chi tiết cách trồng và chăm sóc dâu tây tại nhà cho trái đỏ chín mọng | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
1 I-Strawberry – isiqhamo esiqhelekileyo esizisa ixabiso eliphezulu kakhulu, indlela yokukhulisa nokunyamekela amaqunube ukwenzela ukuba umthi uvelise iziqhamo ezibomvu ezivuthiweyo zinomdla kakhulu kubantu abaninzi.
1.1 Ekuqaleni Ukulungiselela phambi kokutyala
1.1.1 Khetha iintlobo zeStrawberry
1.1.2 Indawo yokuthenga imbewu yequnube
1.1.3 Apho ukulima amaqunube
1.2 2 Ukulima amaqunube egadini
1.2.1 Ukutyala amaqunube ngexesha elifanelekileyo
1.2.2 Tyala amaqunube kwindawo enokukhanya okwaneleyo
1.2.3 Yomba umhlaba ngokufanelekileyo
1.2.4 Ukutyala izithole
1.2.5 Iindlela zokunyamekela i-Strawberry
1.2.6 Ukuvunwa kwamaqunube
1.3 3 Ukukhulisa amaqunube kwiimbiza
1.3.1 Khetha iimbiza oza kuzityala
1.3.2 Umhlaba wokutyala
1.3.3 Nkcenkceshela imbiza
1.3.4 Ukukhula kunye nokuvuna amaqunube
1.4 4 Ukukhulisa amaqunube ngendlela yembewu
1.5 5 Ukukhulisa amaqunube ngokusikwa
1.6 6 Umjikelo wamaqunube
1.7 7 Amanye amanqaku xa kutyalwa
I-Strawberry – isiqhamo esiqhelekileyo esizisa ixabiso eliphezulu kakhulu, indlela yokukhulisa nokunyamekela amaqunube ukwenzela ukuba umthi uvelise iziqhamo ezibomvu ezivuthiweyo zinomdla kakhulu kubantu abaninzi.
Makhe sijonge izinto zokulungiselela kunye nendlela yokukhulisa nokunyamekela ama-strawberries ekhaya ukufezekisa umphumo wokutyala.
Ekuqaleni Ukulungiselela phambi kokutyala
Ngaphambi kokutyala amaqunube, kufuneka ulungiselele izinto eziyimfuneko ukuze ukwazi ukukhulisa amaqunube. Umzekelo, luhlobo luni lwamaqunube ofuna ukuwalima, lungiselela imbewu ukutyala amaqunube nalapho uya kutyala kwaye unakekele amaqunube…
Khetha iintlobo zeStrawberry
Ndingathanda ipere yezinto zokukhafula kwiishethi Kukho iindidi ezimbini ezisisiseko, amaqunube asehlotyeni kunye namaqunube adubula ngexesha lonyaka. Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, unokukhetha ukukhulisa amaqunube kwezi ntlobo zimbini zingasentla, nazi iintlobo zequnube ezidumileyo ezidla ngokukhuliswa, ezizezi:
Amaqunube unyaka wonke okanye angapheliyo: Lo mhlanganiselwa ungakhula uyokufikelela kwiminyaka emi-5+ nto leyo eyenza ukuba udume kakhulu phakathi kwabalimi bamaqunube. Unyaka wonke amaqunube ahlala kwaye akhule kakuhle kwimozulu epholileyo okanye ngaphakathi, minyaka le iintyatyambo kwaye ithwala iziqhamo ezininzi, ke olu lolona didi lufanelekileyo lokukhula ukuba ufuna ukutya amaqunube unyaka wonke.
Iindidi zesivuno sasehlotyeni: Oludidi lukholisa ukuthwala isiqhamo kwinyanga ezimbini emveni kokutyala, kwaye ngokuxhomekeke kwixesha lokutyala, amaqunube angathwala isiqhamo ekuqaleni kwehlobo okanye phakathi kwehlobo. Olu hlobo lwe-strawberry lufanelekile ukusetyenziswa njengento yokupheka okanye ukukhenkceza.
Usuku lweStrawberries: Olu hlobo lwequnube lukwanawo namanye amagama anje nge Zhong Rizhao strawberry, non-photosensitive strawberry, luhlobo lwesiqunube esivelisa ngaphantsi kwamaqunube unyaka wonke, kodwa sithwala isiqhamo rhoqo unyaka wonke. Ukuba unesidingo sokukhetha kunye nokusebenzisa ama-strawberries rhoqo, uhlobo lwe-strawberry lwemini luya kuba lolona hlobo lufanelekileyo.
Alpine Strawberry: Olu luhlobo lwequnube elineziqhamo ezincinci kodwa ezinevumba elimnandi, ezilungele ukwenza ijam.
Khetha iindidi zamaqunube ofuna ukuzikhulisa
Indawo yokuthenga imbewu yequnube
Iintlobo ze-Strawberry zinokufumaneka kwaye zithengwe kwiindawo ezininzi Amaziko okulima okanye iinkampani zeziqhamo nemifuno ezithengisa imbewu. Nangona kunjalo, kufuneka kwakhona Oda kwi-intanethi kwangaphambili ukuba ufuna ukuthenga uhlobo oluthile lwembewu.
Ukuze ukhethe uhlobo olufanelekileyo, kufuneka uhambe kubalimi be-strawberry apho uhlala khona ukwazi kuloo meko yendalo ukuba luhlobo luni lwe-strawberries olunokuphila kwaye lukhule kakuhle.
Xa uthenga imbewu, kuyafuneka bala kwangaphambili xa uceba ukutyala amaqunube ukuze xa uthenga imbewu yokutyala, imithi iya kukhula kakuhle kwaye ivelise iziqhamo ezininzi, ukuphepha ukuthenga nokutyala ngexesha elingafanelekanga, imithi iya kufa okanye ayinakukhula.
Apho ukulima amaqunube
Ngethuba nje ubonelela ngomhlaba oyimfuneko kunye nesichumisi kwizityalo, amaqunube aya kukhula kakuhle nokuba ukhule egadini okanye kwisitya.
Phawula: ungakhuli amaqunube kumaqondo obushushu ashushu kakhulu, kwaye ukuba utyala amaqunube kwindawo ebandayo unyaka wonke, kufuneka uwatyale kwizikhongozeli ezinokungeniswa lula endlini ngamaxesha abandayo afana nekwindla okanye ubusika.
2 Ukulima amaqunube egadini
Kuyimfuneko ukuba ube nobuchule obuchanekileyo bokutyala i-strawberries kwintsimi ukwenzela ukuba i-strawberries ikhule ngokukhawuleza, iphuhlise kakuhle kwaye ivelise iziqhamo ezininzi. Ngokukodwa, la manqaku alandelayo:
Ukutyala amaqunube ngexesha elifanelekileyo
Qhagamshelana ngolwazi malunga nokupakishwa kweentlobo ezahlukeneyo okanye iingcebiso ezivela kumthengisi wemithi ukukhetha ixesha elifanelekileyo lokutyala.
Iintlobo ze-strawberry zasehlotyeni zidla ngokutyalwa kwinyanga yesibini yehlobo, okanye kwisiqingatha sesibini sehlobo lelona xesha licothayo kufuneka ulime amaqunube.
Elona xesha lilungileyo lokutyala amaqunube eAlpine kwinyanga yesibini neyesithathu yentwasahlobo.
Amaqunube unyaka wonke kufuneka atyalwe ekwindla kuba eli lelona xesha lokulima amaqunube, oku kuya kunceda isityalo ukuba somelele kwaye sibe neengcambu ezomeleleyo kunokutyala ebusika, ngakumbi kwiindawo ezinemozulu epholileyo.
Indlela yokukhulisa amaqunube egadini
Tyala amaqunube kwindawo enokukhanya okwaneleyo
Khetha indawo enelanga kodwa engashushu kakhulu ukuze amaqunube akhule esempilweni kwaye ngokukhawuleza. Ungatyala amaqunube kwindawo enomthunzi, kodwa isityalo asiyi kukhula njengendawo enelanga.
Yomba umhlaba ngokufanelekileyo
Lula umhlaba wamaqunube kwaye wongeze isichumiso esaneleyo. Okukhona umhlaba utyebile, kokukhona amaqunube akhula ngcono, ke ngoko xuba isixa esifanelekileyo se-compost ebolile ngokupheleleyo emhlabeni, wongeze i-3/4 yekomityi ye-dolomite kwi-square meter yomhlaba ukuba umhlaba useneasidi kakhulu.
Kamva gquma umaleko ophezulu womhlaba ngomaleko weendiza, amagqabi okanye isichumiso xa utyala amaqunube ngaphakathi ukugcina isityalo sicocekile.
Xa uthenga amaqunube, ahlala egcinwe kwiibhokisi, ngoko ke kufuneka uyikhuphe kwaye ufunxe iingcambu emanzini malunga neyure enye ukuqinisekisa ukufuma okwaneleyo kwiingcambu kunye nokunciphisa ukothuka xa uzisa izityalo ukusuka kwindawo yokukhula. emhlabeni.
Emva koko ubeke isityalo samaqunube kumngxuma ogrunjwe emhlabeni ukuze isiseko somthi singagcwali emhlabeni, gcwalisa kwaye udibanise umhlaba ngobunono kwaye ugcine umgama we-35-45cm phakathi kwezityalo ukuba unezityalo ezininzi ze-strawberry.
Tyala umthi wamaqunube osana
Iindlela zokunyamekela i-Strawberry
Ukunyamekelwa kwe-Strawberry kubaluleke kakhulu ekukhuleni okulungileyo kwezityalo, ngoko kubalulekile ukuqaphela oku kulandelayo:
Izitshizi: Ngenxa yokuba iingcambu zifuna amanzi aneleyo, kufuneka uhlale unkcenkceshela izityalo rhoqo, ubeke ingqalelo ukunkcenkceshela iingcambu, kungekhona isiqhamo, kwaye ungankcenkcesheli kakhulu. Ixesha lokwazi ixesha lokunkcenkceshela isityalo kuxa umhlaba uvakala womile. Kufuneka unkcenkceshele isityalo kabini kusasa nasemva kwemini xa ilanga liphumile.
Ukuchumisa: Sebenzisa izichumisi ezingamanzi ukuchumisa izityalo, musa ukusebenzisa izichumiso ezinyibilikayo emanzini kunye ne-nitrogen eninzi ukuchumisa izityalo kuba ezi zichumisi ziyakwenza ukuba izityalo zikhule amagqabi ngaphezu kweziqhamo.
Emva kokuvuna isiqhamo, qhubeka nokunyamekela i-strawberries ngokuba umthi wohlala uvelisa isiqhamo, ukuba uthe wagcinwa uphilile.
Ingcebiso elungileyo: Sika iintyatyambo zokuqala eziqhakaza kunye nomphezulu wesityalo esikhula emva kwenyanga e-1 yokunyamekela, ukwenza oko kuya kunceda isityalo sibe namandla kwaye iingcambu nazo ziphilile.
Qwalasela izityalo zamaqunube ukuze zikwazi ukubona ngokukhawuleza xa kuvela amaqunube amancinci aluhlaza, ngoku unako. sebenzisa umnatha we-strawberry ukukhusela. Xa amaqunube ajika abebomvu, ungawavuna.Xa uvuna, khumbula ukutsala ngobunono amaqunube ngokugoba isalathisi sakho kunye neminwe ephakathi ukunqanda ukonakalisa isiqu.
3 Ukukhulisa amaqunube kwiimbiza
Ukukhulisa amaqunube kwiimbiza
Enye indlela ethandwa kakhulu yokulima amaqunube kukukhulisa amaqunube kwiimbiza. Le ndlela yokutyala ilula kwaye ikulungele kakhulu ukususa umthi kwindawo eneemeko ezifanelekileyo. Ngale ndlela yokutyala, kufuneka unikele ingqalelo koku kulandelayo:
Khetha iimbiza oza kuzityala
Khetha iimbiza ezinemingxuma yokuhambisa amanzi ukukhulisa amaqunube ukunceda izityalo zihlale zomile, zingavalwa ngamanzi kwaye zikhule ngcono.
Umhlaba olungileyo wamaqunube ngumhlaba one pH ye 5.3 ukuya ku 6.5., yongeza i-organic fertilizer emhlabeni inyanga nenyanga ukwandisa ukuchuma komhlaba. Ukuba ukhulisa amaqunube kwiimbiza ezingamenyezwanga, yongeza i-1/4th yomhlaba wepeat phantsi kwembiza ngaphambi kokutyala, ukuba ukhula kwiingobozi ezijingayo, sebenzisa i-peat moss emacaleni engobozi yokuxhoma ukwandisa umthamo wokubamba.
Khetha umhlaba wokulima amaqunube
Ngaphambi kokutyala amaqunube, nceda Nkcenkceshela de ubone amathontsi amanzi ephuma emazantsi embizaemva koko zifunjwe kwiinduli ezincinci malunga ne-7cm ububanzi kunye ne-2.5cm ukuphakama ukuze kulinywe amaqunube.
Ukukhula kunye nokuvuna amaqunube
Emva kokufunxa iingcambu zamaqunube emanzini, susa isityalo kwaye ubeke iingcambu phezu kwenduli, emva koko uxube kakuhle iingcambu ukuze izikhondo zisasazeke ukusuka phezulu kwenduli ukuya ezantsi. ngaphakathi kufuneka ibe sentanyeni yeengcambu, hayi yonke.
Ekugqibeleni, xa utyala amaqunube, nkcenkceshela ngetoti yokunkcenkceshela ukuze amanzi atshizwe ngokulinganayo ukuphepha umngcipheko wokugcwala kwamanzi. Unkcenkceshela ngokunjalo naxa utyala egadini, unkcenkceshela kabini ngemini kusasa nasemva kwemini xa ilanga liphumile.
Njengamaqunube akhule egadini, amaqunube akhule kwiimbiza nawo angavunwa emva kweenyanga ezi-2 zokhathalelo, ngeli xesha ungakha amaqunube oza kuwasebenzisa.
4 Ukukhulisa amaqunube ngendlela yembewu
Ukukhulisa amaqunube ngendlela yembewu
Sihlala sibona abantu besebenzisa izityalo ezincinci ukukhulisa amaqunube, kodwa akunakwenzeka ukukhulisa amaqunube kwimbewu. Nantsi indlela yokukhulisa amaqunube ngokwenza imbewu:
Inyathelo loku-1 Wena nkcenkceshela umhlaba Qinisekisa ukuba umhlaba unokufuma okwaneleyo.
Inyathelo lesi-2 Wena yenza imingxuma emincinci emhlabeni malunga ne-5mm kwaye ihlukaniswe i-15cm okanye ngaphezulu. Sebenzisa i-tweezers ukucinezela ngobunono imbewu kwimingxuma emhlabeni hey, umngxuma ngamnye ubeke amaso ama-3.
Inyathelo lesi-3Gquma umhlaba kwaye udibanise umhlaba ngezandla zakho Ngobunono yiyeke imbewu ikhule.
Inyathelo lesi-4 Nini Emva kokuba imbewu ihlumile, gubungela phezulu ngefilimu yokutya izityalo ukugcina ukufuma. Beka isityalo kwindawo enelanga, ebusika kufuneka ubeke isityalo kwi-radiator okanye indawo efudumeleyo ukuze ikhule.
Inyathelo lesi-5Uvavanyo lomhlaba lwemihla ngemihlaxa umhlaba womile, khupha ukutya okusonge emanzini uze emva koko ukugqume emva kokunkcenkceshela.
Inyathelo lesi-6 Xa imbewu intshula yaza yakhula yaba zizityalo ezincinci. nciphisa imithi kwaye uthene emincinci ukudala indawo yokuba izityalo zikhule.
5 Ukukhulisa amaqunube ngokusikwa
Ukukhulisa amaqunube ngokusikwa
Ukusikwa yeyona ndlela ixhaphakileyo yokukhulisa izityalo namhlanje. Ngokusikwa kwequnube, khetha kuqala iziqu ezomeleleyo zequnube ezingencinci okanye zindala kakhulu.
Izityalo ezisikiweyo zityalwe emhlabeni kunye nenxalenye yomhlaba ovela kwisityalo sikamama, uxutywe nezichumisi eziphilayo. Emva kwenyanga eyi-1 yokugcina umthi ngale ndlela, qalisa ukunyamekela umthi njengesiqhelo.
6 Umjikelo wamaqunube
Amaqunube anemijikelo emininzi yokukhula enyakeni kwaye kuxhomekeke kumjikelo ngamnye, sinendlela yethu yokunyamekela amaqunube. Ngokukodwa:
Ekuqaleni kobusika (Novemba-Januwari): Khupha ukhula olujikeleze umthi kwaye ususe izinto ezinokubangela i-fungus emthini, khangela ukuba kukho naziphi na izityalo ezidinga i-mulch eyongezelelweyo ukugubungela izityalo.
Ekupheleni kobusika (ngoJanuwari-Februwari): Eli kwakhona lixesha elifanelekileyo lokutyala amaqunube, khetha iindlela ezimbini zokukhulisa amaqunube kwiimbiza okanye ngaphakathi.
Early Spring (March-April): Ukunyamekela nokuchumisa izityalo.
Ekupheleni kwentwasahlobo (ekupheleni kuka-Epreli): Ukuba kusabanda, yongeza i-mulch, ukuba sele ishushu, yisuse i-mulch ukuze umthi ukhule kwaye uthwale isiqhamo kwangethuba. Ngeli xesha, kuyimfuneko ukubeka ingqalelo ekusebenziseni amanyathelo okukhusela umthi kwizinambuzane.
Ekuqaleni kwehlobo (Meyi-Juni): Ukuhlolwa rhoqo ukuze kubonwe ngokukhawuleza kwaye kuthintelwe izifo zemithi kunye nokuthintela ukutshatyalaliswa kweentaka. Yongeza umaleko we-humus kwaye ukhumbule ukunkcenkceshela isityalo ngamaxesha athile.
Ekupheleni kwehlobo (Julayi-Agasti): Eli lixesha leziqhamo, amanzi kunye nokuvuna amaqunube avuthiweyo.
Ekuqaleni kwekwindla (Septemba-Okthobha): Ukuba kusekho amaqunube asele evuthiwe, wakha phantsi onke ukuze umthi uthwale isiqhamo kwixesha elizayo lonyaka, uchumise uze uwathene amasebe amadala ukuze umthi uphile kakuhle ebusika.
Ekupheleni kwekwindla (Okthobha-Novemba): Eli lixesha apho kufuneka ulungiselele amanyathelo okunceda umthi uphile ebusika.
7 Amanye amanqaku xa kutyalwa
Iingcebiso zokukhulisa amaqunube
Ngokuxhomekeke kwiindidi, umthi Amaqunube awayi kuthwala isiqhamo emva kweminyaka eyi-4-6 yokulima.
Ukukhula kwezityalo ezisuka kwimbewu kunokuvelisa amaqunube amancinci namuncu endaweni yokutyala izithole.
Amaqunube, ukuba axhonywe emhlabeni ixesha elide, aya kubola Zichole xa sele zivuthiwe.
Ukubonelela ngelanga elaneleyo Jikelezisa indawo yokukhula rhoqo ukuba ukhulisa amaqunube kwiimbiza okanye iingobozi ezijingayo.
Ukuba amagqabi esityalo aluhlaza okhanyayo okanye aziva eyimfuneko, nceda Yongeza amabala ekofu emhlabeni ukwandisa isiqulatho senitrogen.
Ukuba amaqunube sele enamanzi, agula okanye anezifo zokungunda ezifana nokungunda okungwevu, indawo yegqabi kunye nokungunda kwequnube, ulunge ngakumbi Susa izityalo zamaqunube ezigulayo kwaye utyale ezintsha.
Ngolwazi malunga nendlela yokukhulisa nokunyamekela ama-strawberries amajikijolo abomvu anikezelwe nguBach Khoa GREEN, ngoku unokuzithemba ukutyala kunye nokunyamekela ama-strawberries ekhaya.
Thenga amaqunube amnandi eBach Hoa GREEN:
Ivenkile yeSebe ELUHLAZA
Hướng dẫn cách trồng cây hương thảo chi tiết nhất, ai cũng làm được | Hatgiongtihon.net
Chi tiết cách trồng dưa lưới đúng kỹ thuật, năng suất cao | Hatgiongtihon.net